AféCafes | Booqo Hultsfred
Ismaris aad u macaan, keegyo qaali ah ama keega raaxada leh - qaxwo oo raaxee!
Ku naso koob kafee ama shaah ah. Ka dooro kuwa aad ugu jeceshahay keega guriga lagu sameeyo, pies, waffles ama qado fudud. Waxaa jira maqaaxiyo laga qaxweeyo oo ku yaal dhammaan deegaannada suurtagalka ah.
🍽️Cun oo cab
Bartamaha Hultsfred waxaa ku taal Lavida Coffe. Qolal ballaadhan oo qurxoon waxaad ka iibsan kartaa wax kasta laga bilaabo keega iyo macmacaanka ilaa qadada fudud. Xaq baad u leedahay
Koonfurta Virserum waxaa ku yaal Dackestupet iyo Friluftscafé - Dackestupet. Xilliga jiilaalka meel loo dalxiis tago iyo waqtiyo kale oo ah tas-hiilaadka baaskiil wadida, MTB iyo socodka. Guriga ugu sarreeya
Frendo iyo Hultsfred
Ma waxaad xiiseyneysaa kafee ama gaajaysan? Ma rabtaa koob kafee cusub oo la kariyey? Mise waxaad si fudud ugu baahan tahay inaad gaariga shidaal ka buuxiso? Waxaan kuu soo bandhigeynaa iibinta cuntada degdegga ah, macmacaanka,
Waa inaadan ka maqnaan Café Flotten markii aad booqato aagga Shirkadda. Kafeega waxaa maamula urur aan faa'iido doon ahayn wuxuuna wax ku biiriyaa howlaha ururka. Halkan waxaad ka iibsan kartaa jalaato ama
Inta udhaxeysa Målilla iyo Virserum waxaad ka heli doontaa tuulada yar ee Flaten iyo Bageriet Björkaholm. Halkan waxaad ku dubaysaa miisaan yar oo tayo sare leh oo ka kooban maaddooyinka. Kibistii rootida, baguettes,
Café Centrum waxay ku taal hareeraha wadada lugta ee Hultsfred. Si fudud loo helo iyo tas-hiilaad dhigasho wanaagsan oo u dhow. Halkan waxaad kaheli kartaa qaxwo ama wax ku iibsan kartaa
Halkan waxaad kula nooshahay aragti qurux badan oo ku taal harada Hulingen! Waxaad u dhowdahay xeebta, tas-hiilaadka iyo makhaayadda. Socod dheer oo laba kiiloo mitir ah oo lagu maro wadada socodka
Makhaayaddu waxay ku taal Virserums Konsthall. Halkan waxaad ku dalxiis tagi kartaa farshaxanka farshaxanka oo aad u bogi kartaa farshaxanka ka dibna ku raaxeysan kartaa kafee wanaagsan Halkan
Centralkonditoriet waa rootiga rootida iyo keydinta raaxada oo aad kaheli karto qaxwe ama ka iibsan karto guri aad dubtay. Waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo dubo ah, keega, rootiyada
Beerta Räven & Osten, Lida ee ka baxsan Järnforsen, jiiska waxaa lagu sameeyaa farsamo iyo qaab yar. Caanuhu waxay ka yimaadaan beeraley deegaanka ah. Ku dhagan caanaha
Kafe Saddex Walaalo ah
Café Tre Systrar waa makhaayad yar oo miyi ah oo leh guri, dabiici ah oo gudaha lagu soo saaro iyadoo diiradda la saarayo. Halkan waxaad fursad ugu leedahay inaad ku iibsato farsamada gacanta iyo waxyaabo kale